भिजिट भिषामा काम गर्न दुबई गएका २ सय जना नेपाली सेनाका जवान विचल्ली, यी हुन् दलाल ! | Diyopost - ओझेलको खबर भिजिट भिषामा काम गर्न दुबई गएका २ सय जना नेपाली सेनाका जवान विचल्ली, यी हुन् दलाल ! | Diyopost - ओझेलको खबर
भिजिट भिषामा काम गर्न दुबई गएका २ सय जना नेपाली सेनाका जवान विचल्ली, यी हुन् दलाल !
दियो पोस्ट बिहिबार, पौष १५, २०७८ | १८:५५:३५
काठमाडौं । नेपालबाट अवैध रुपमा दुबई पुगेका हजारौँ नेपालीको विचल्ली भएको छ । भिजिट भिषाको नाममा दलालहरुले हजारौँ नेपालीलाई दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने कार्य बढ्न थालेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४० हजार नेपालीहरु भिजिट भिषामा दुबई पुगेका छन् त्यसमध्ये ३० हजार नेपालीको विचल्ली भएको छ ।
दलालहरुले आकर्षक तलब र जागिर मिलाइदिन्छु भन्दै नेपालीहरुलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर भिजिट भिषामा युएई पुर्याएका हुन् । विमानस्थलमा कर्मचारी र दलालको सेटिङमा दुबई पुगेका हजारौँ युवा मध्ये केही युवाहरु दियोपोस्ट डटकमको सम्पर्कमा आएका छन् ।
नेपाली सेनाको जागिर छाडेर भिजिट भिषामा दुबई पुगेका उनीहरुलाई दलालहरुले दुबई आर्मीमा काम लगाइदिन्छु भन्दै त्यहाँ पुर्याएपछि बन्धक बनाएर राखेको दुबईबाटै सम्पर्कमा आएका ती युवाले दियोपोस्टसँग बताए ।
दुबईमै कार्यालय रहेको त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीजले नेपालबाट अवैध रुपमा भिजिट भिषामा सयौँ युवाहरुलाई दुवई लिएर गएको खुलेको छ । उक्त कम्पनिले आर्म्स गार्डमा जागिर खुलेको छ भन्दै भ्याकेन्सी प्रचार गरेको थियो । उक्त सुचना अनुसार नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका नेपालीलाई मात्रै जागिरमा लगाइने उल्लेख थियो । ३ हजारको संख्यामा नेपाली सेनाका कर्मचारीहरु मागेको भन्दै निकालिएको भ्याकेन्सी नोटिसमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार अमेरिकन डलर तलब हुने आश्वासन बाँढिएको थियो । तर, सोही आश्वासनको भरोषामा नेपाली सेनाको जागिर छाडेर भिजिट भिषामा दुबई पुगेका २ सय जना नेपाली सेना यतिबेला विचल्लीमा परेका हुन् ।
‘हाम्रो पासपोर्ट कब्जा गरेर राखिएको छ । भिषाको म्याद थप्न पनि पैसा लाग्ने रहेछ । भिषाको म्याद पनि सकिएको छ । तर, कम्पनिले जागिर लगाउन सकेको छैन । हामी विचल्लीमा परेका छौँ,’ दुबईस्थित ती नेपालीले भने,‘उता जागिर छाडेर यता आइयो । यहाँ आएपछि विचल्ली भयो । भिजिट भिषामा दलालहरुलाई ३ लाख रुपैयाँ बुझाएर यहाँ आयौँ ।’
को हुन् दलाल ?
भिजिट भिषामा नेपालीहरुलाई दुबई पुर्याएर काम लगाउँछु भन्दै विचल्ली बनाउने प्रमुख दलाल हुन्–कोमलराज उपाध्याय । उनी त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीजका मालिक समेत हुन् ।
उनकै कम्पनिले भिजिट भिषामा दुबई पुर्याएका नेपाली सेनाका जवानहरुको विचल्ली भएपछि उनीहरुसँग दलाल उपाध्ययले कागज गरेका छन् । दियोपोस्टले फेला पारेको उक्त कागजातमा उनले गत नोभेम्बर २७ मा एक हप्ता भित्र काम लगाइदिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, डिसेम्बर ३० हुँदा समेत काम नलगाएपछि विचल्लीमा परेका युवाहरुले आफूहरुको उद्दार गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपालबाट भिजिट भिषामा दुबई लाने चाँजो पाँजो भने सन्तोष सुवेदी र राजन शाह ठकुरीले मिलाएका थिए । उनीहरुले नै सेनाका जवानहरुबाट ३ लाखदेखि ४ लाखसम्म असुली गरेका थिए ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा एयरपोर्ट सेटिङ !
वास्तविक रुपमा दुबई घुम्न जाने पर्यटकको हुलिया कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीलाई नहुने होइन । नेपालबाट रोजगारीकै शिलशिलामा भिजिट भिषामा दुबई जानेहरुले लगाउने कपडा र वास्तवीक पर्यटन भिषामा जानेहरुले लगाउने कपडा समेत फरक हुने भएपनि विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीले भिजिट भिषामै दुबई जानेका लागि रोक लगाएको देखिन्छ ।
तर, रोजगारीको लागि भिजिट भिषामा जाने नेपालीहरुलाई भने खुलमखुल्ला प्रवेश गराइरहेको विमानस्थल सुत्रले दियोपोस्टलाई जानकारी दियो ।
‘जो वास्तविक रुपमा भिजिट भिषामा दुबई जान चाहेका छन् त्यस्ताका लागि विभिन्न उल्झन हुने गरेको छ । अध्यागमनका कर्मचारीले केहीदिन अघि एउटा सहकारीको नाममा टुर प्याकेज किनेर घुम्न जान लागेकालाई फर्कायो नै । तर, जो रोजगारीको लागि भिजिट भिषाको प्रयोग गरेर गइरहेका छन् त्यस्तालाई खुलमखुल्ला प्रवेश गराइएको छ,’ विमानस्थल स्रोतले भन्यो,‘दलालहरुले अध्यागमनका कर्मचारीलाई कमिशन बुझाएर यस्तो भइरहेको छ । दलालको पहुँच यहाँ मात्रै होइन दुबईको विमानस्थलमा पनि छ ।’
भिजिट भिषामा दुबई मानव तस्करी गर्ने गिरोहले श्रीमतीलाई समेत धन्दामा सामेल गराएको खुलाशा !
बिहिबार, पौष १५, २०७८ | १८:५५:३५
नगरप्रहरीलाई ५ हजार घुस नदिँदा मकैपोल्ने दम्पत्तिमाथि…
‘केपी ओलीको धर्म छोरो हुँ’ भन्दै चितवनमा…
धादिङमा युवा संघ अध्यक्ष कमल सिलवालको ‘दादागिरी’…
सडकमा मकै बेच्नेमाथि नगर प्रहरीको लछारपछार
काठमाडौं उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै
नगरप्रहरीलाई ५ हजार घुस नदिँदा मकैपोल्ने दम्पत्तिमाथि लछारपछार भएको खुलाशा !
‘केपी ओलीको धर्म छोरो हुँ’ भन्दै चितवनमा घिमिरेको गुण्डागर्दी : प्रध्यापकमाथि कुटपीट ! [भिडियोसहित]
धादिङमा युवा संघ अध्यक्ष कमल सिलवालको ‘दादागिरी’ : मध्यरातमा होटल तोडफोड, संचालकमाथि कुटपीट !
‘केपी ओलीको धर्म छोरो हुँ’ भन्दै चितवनमा घिमिरेको गुण्डागर्दी :…
धादिङमा युवा संघ अध्यक्ष कमल सिलवालको ‘दादागिरी’ : मध्यरातमा होटल…
स्वर्गीय प्रकाशको सालिक ककनीमा, प्रचण्डले गरे अनावरण